खोस्टाको मुढा बनाउँदै गृहिणी « Janata Samachar
खोस्टाको मुढा बनाउँदै गृहिणी
प्रकाशित मिति : 21 July, 2019 6:33 pm
कास्की । पछिल्लो समय सीपमा आधारित हस्तकलाको माग बढ्दै गएपछि सीप सिक्न गृहिणी महिलाको रुचि र जाँगर बढ्न थालेको छ ।
पोखरामा मकैको खोस्टाबाट बनाइएका मुढाको माग बढ्न थालेपछि तालिम सिक्ने र घरमै मुढा बनाएर आयआर्जन गर्ने महिला बढ्न थालेको कास्की पोखरा हस्तकला सङ्घका अध्यक्ष एवं पद्मावती हस्तकला उद्योगका सञ्चालक हिरा भट्टराई बताउनुहुन्छ ।
‘हामीले यस उद्योगबाट विभिन्न तालीम प्रदान गर्छौं । तर पछिल्लो समय मकैको खोस्टाबाट बनाइएको मुढाको माग बढ्न थालेपछि यही तलिमलाई हामीले निरन्तरता दिँदै आएका छौं’, भट्टराईले भन्नुभयो, ‘अहिले लायन्स क्लब अफ पोखरा गण्डकीको आयोजना र पद्मावती हस्तकलाको सहकार्यमा ३० जनाको टोलीलाई दुई साताको तालिम दिइसकेका छौं । लगत्तै अर्को टोली पनि इच्छुक भएर माग गर्नुभयो । यसलाई पनि निरन्तरता दिएका छौं ।’
‘फेन्सी’ सामानले बजारमा हस्तकलाको व्यापार घटाइरहेको भन्ने कतिपय कुरामा पूरै सहमत हुनुहुन्न उद्यमी भट्टराई । उहाँका अनुसार मानिसका चाहना एकै किसिमका हुँदैनन्, सबैले फेन्सी तयारी सामान मात्रै मन पराउँछन् भन्ने लाग्दैन । अहिले प्राकृतिक र हस्तकलाका सामग्रीको बजार राम्रो हुँदै गएको छ । ‘बजारमा पाइने तयारी मुढालाई बाहिरबाट विनारङरोगन मकैका खोस्टाको बुनाइले छोपिन्छ र आकर्षक बनाइन्छ । यो प्राकृतिक पनि देखिन्छ । अहिले नियमित ६ जना महिला घरमै मुढा बुनेर तयारी भएपछि ल्याउने गरेको भट्टराईको भनाइ छ ।
मकैको खोस्टाको मुढाको पछिल्लो समय विभिन्न होटलबाट आउन थालेको पद्मावती कोशेली घरका बजार व्यवस्थापक पूर्णिमा रिजालले बताउनुभयो । ‘हामीलाई काठमाडौंबाट ५० मुढाको ‘अर्डर’ आएको छ । केही समय मागेका छौं। यसका साथै पोखरा लेकसाइडका होटल घरमा र विदेशमा रहेका नेपालीको रोजाइमा पनि यो यस्तो मुढा पर्ने गरेको छ ।’ यस प्रकारको मुढालाई धेरै नेपालीले विभिन्न देश पुर्याउने गरेको उहाँको भनाइ छ । दुईदेखि साढे तीन केजीसम्मको तौल हुने भएकाले विदेश लान चाहनेलाई त्यति गाह्रो नहुने उहाँले बताउनुभयो ।
६ महीनादेखि मुढा बनाउँदै आउनुभएकी हीरा कुँवर आयआर्जनको राम्रो माध्यम भएको बताउनुहुन्छ । ‘मैले पद्मावतीबाट तालिम लिएँ र अहिले सिकाउँदै आएकी छु, व्यावसायिकरूपमा मुढा बुन्दै आएकी छु, एउटा मुढा बनाएवापत एक हजार रुपैयाँ ज्याला पाउने उहाँको भनाइ छ । ‘घरको काम सबै सकेर बचेको समयमा मात्रै बनाउँछु, दुई तीन दिन लाग्छ । जति जाँगर चलायो उत्ति कमाइ हुन्छ नि ।’
तालिम लिइरहनुभएकी पोखरा महानगरपालिका वडा–१४ काजी पोखरीकी ४४ वर्षीया लीला थापा तालिमपश्चात् यही सीपलाई व्यवसायमा परिणत गर्ने सोच भएको बताउनुहुन्छ । ‘मैले पहिलोचोटि यो तालिम लिएकी हूँ, अब यसलाई व्यासायिकरूपमा अघि बढाउने सोच बनाइरहेकी छु ।’
झाडु कुचोको सानो पसल गर्दै आउनुभएकी मुना गुरुङले तालिमपश्चात पसलमा मुढा बनाएर बेच्ने बताउनुभयो । ‘तालिमले अब एउटा सीप दिएको छ । अब आफ्नो व्यवसायमा यो अर्को उत्पादन थप्छु । ‘फिनिसिङ’ नभएको सामान बिक्री गर्न गाह्रो हुने र त्यसलाई आकर्षक बनाउन थप मेहनत जरुरी हुने गुरुङले बताउनुभयो ।
‘मकैको खोस्टाबाट बनाएका मुढा हीरा भट्टराईको फेसबुकवालमा देखेपछि निकै आकर्षक लाग्यो तुरुन्तै उहाँसँग सम्पर्क गरेर ६ वटा मुढा र ६ वटा चकटी लिएर गएँ ।’
लायन्स क्लब अफ पोखरा गण्डकीका निवर्तमान अध्यक्ष मोना थापाले भन्नुभयो, ‘घरमा आउने पाहुनाले मुढा निकै मन पराएर सोधीखोजी गर्नुहुन्छ ।’
तस्बिरः हिरा भट्टराई (कार्यकारी सदस्य, नेपाल हस्तकला महासंघ) काे फेसबुकबाट
‘जनता टेलिभिजन जनताका सारथीलाई साथ दिन तयार छ’ (भिडियाेसहित)
समाजको औद्योगिक चेतना, संस्कार र संस्कृतिजस्ता विषयहरुलाई अग्रगामी बनाउँदै लैजानुपर्छ भन्ने हाम्रो स्पष्ट मान्यता छ
गोपाल पाठक/विनोद लामिछाने/अनिश्मा बस्नेत काठमाडौं । जनता टेलिभिजनमा आज (मंगलबार) प्रसारण गरिएका एक सय समाचारको
काठमाडौं । दक्षिण एसियाली खेलकुद (साग) को १३औँ संस्करण समापन भएको छ । दशरथ रंगशालामा
सिमेन्ट कारखानाबाट निकालिएकी महिलाद्वारा आत्महत्या
रामभरोसि यादब सिरहा । कामबाट निकालिइएपछि गोलबजारमा एक महिलाले आत्महत्या गरेकी छिन् । गोलबजारमा रहेको
‘जनता टेलिभिजन जनताका सारथीलाई साथ दिन…
समाजको औद्योगिक चेतना, संस्कार र संस्कृतिजस्ता विषयहरुलाई अग्रगामी बनाउँदै लैजानुपर्छ भन्ने हाम्रो स्पष्ट मान्यता छ । यसैका लागि हामीले सानो-सानो…
गोपाल पाठक/विनोद लामिछाने/अनिश्मा बस्नेत काठमाडौं । जनता टेलिभिजनमा आज (मंगलबार) प्रसारण गरिएका एक सय समाचारको संगालो नै शत् प्रतिशत समाचार…
काठमाडाैं । दक्षिण एसियाली खेलकुद (साग) काे पुरूष फुटबलमा नेपालले स्वर्ण पदक प्राप्त गरेकाे छ । नेपालले भुटानलाई २–१ को…
चेकोस्लोभाकिया । पूर्वी शहर ओस्ट्रोभामा अवस्थित अस्पतालमा मङ्गलबार एक बन्दुकधारीले प्रहार गरेको गोलीबाट चार व्यक्तिको मृत्यु भएको छ । यस…
काठमाडौं । ‘यौनहिंसा भनेको के हो ? कसरी हुन्छ ? हिंसामा परेका महिलाले कसरी व्यक्त गर्ने ? कोसँग, कहाँ गएर…
२०७६ मंसिर २४ गतेकाे राशिफल
मेष- नयाँ कामको सुरुवात हुनेछ, काममा रुचि बढ्नेछ । वृष- अनावस्यक विवाद पर्नेछ, यात्रामा कठीनाइ हुनेछ । मिथुन- नयाँ कामको…
प्रधानमन्त्री ओली ग्राण्डी अस्पतालमा
मुलुकमा अपराध र दण्डहीनता बढ्याे
घट्न थाल्यो सुनको मूल्य